Solidworks Foundation Course | Myanmar Online School
👉SolidWorks Foundation Course For Engineers
📒Mechanical Engineering မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ Software အတော်များများ ရှိပါတယ်။ Solidworks, Catia, Inventor, NX, Rhino6, Ansys, Matlabs,AutoCAD စတဲ့ Software တွေကို လေ့လာဖို့အတွက် ပထမဆုံးအနေနဲ့ Solidworks Foundation Course ကို စတင် Launch လုပ်လိုက်ပါပြီ။
👱‍♀️သင်မယ့်သူကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ B.E(Mechanical Engineering) နဲ့ ကျောင်းဆင်းထားပြီး လက်ရှိ ယိုးဒယားနိုင်ငံမှာ Senior Mechanical Engineer အနေနဲ့ Design and Drafting ပိုင်း အလုပ်အတွေ့အကြုံကောင်းများစွာရှိတဲ့ ဆရာမ နန်းခွန်ခမ်း သင်ကြားပေးမှာမို့ တက်ဖြစ်အောင် တက်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
📶သို့သော် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂျင်းသင်တန်းတွေ မြောက်မြားစွာကို ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးလို့ သင်တန်းဆိုတာကို တက်ဖို့တောင် တွန့်ဆုတ်နေသူတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Course Curriculum ထဲမှာ ဘာတွေသင်သလဲဆိုတာနဲ့ သင်ပုံသင်နည်းပုံစံကို ၀င်ရောက် အစမ်းလေ့လာပြီး သဘောကျမှ ဆက်တွက်ဖို့လည်း အကြံပေးချင်ပါတယ်။
သင်တန်းအနေနဲ့ တက်ရောက်မယ့်လူများကတော့ အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်း လာရောက် တက်နိုင်ပါတယ်။
Phone: 099 6540 1222, 09263 281 989
နမူနာအနေနဲ့ ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ပုံစံ Project ပုံများကိုတော့
Course အတွင်းမှာတော့ အသေးစိတ်တခုစီ သင်ကြားထားပါတယ်။
Connecting Rod Sub Assembly_
Crank Case Top
Piston Head Sub Assembly
Learn how to navigate the SOLIDWORKS interface, create sketches, set up parametric relationships, and create 3D models. Explore the basics of creating assemblies and generating 2D production drawings.
1. Introduction (11:05)
2. View Manipulation (18:42)
3. Line and Rectangle (15:34)
4. Circle, Arc and Relations (19:15)
5. Dimensions (18:36)
6. Cover Plate (11:15)
7. Gasket (14:03)
8. Conveyor Link (16:31)
9. Slot, Polygon, Spline and Ellipse (15:19)
10. Trim, Extend and Fillet (11:13)
11. Convert Entities and Rapid Sketch (7:10)
12. Offset, Mirror and Move (19:06)
13. Linear and Circular Sketche Pattern (13:01)
14. Extrude Boss and Exturde Cut (18:53)
15. Revolved Boss and Revolve Cut (18:53)
16. Swept Boss and Swept Cut (13:34)
17. Bearing Plate (14:58)
18. Bed Plate (10:35)
19. Loft and Shell (14:06)
20. Boundary Boss, Boundary Cut and Loft Cut (11:48)
21. Rib (11:39)
22. Housing (32:01)
23. Side Cover-Machined (6:49)
24. Worm Gear Shaft (13:04)
25. Worm Gear (9:46)
26. Offset Shaft (9:06)
27. Top Cover (11:00)
28. Cup (9:55)
29. Spring (12:21)
31. Offset Shaft (18:09)
32. Wrap (11:49)
33. Bottle (22:00)
34. Bottle Loft (8:41)
35. Worm Gear Complete (16:59)
36. Side Cover (19:40)
37. Housing Drawing (28:31)
38. Top Cover Drawing (8:36)
39. Offset Shaft (14:16)
40. Worm Gear Drawing (16:07)
41. Assembly Modeling (19:25)
42. Smart Mate (21:40)
43. Design Table (23:49)
44. Interference Detection (3:34)
45. Exploded View (18:57)
46. Assembly Configuration (25:34)
47. Assembly Drawing (19:10)
48. Animation (22:06)
49. Design Table Drawing (8:37)
50. PhotoView 360 (14:53)
51. SimulationXpress (13:35)
တခါ သင်တန်း‌ကြေးသွင်းထားရုံနဲ့ Expire မရှိပဲ အမြဲတက်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။